Raysal wasaare oo ku wajahan Magaalada Marka. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Raysal wasaare oo ku wajahan Magaalada Marka.
Raysal wasaare oo ku wajahan Magaalada Marka.
Xasan Cali Khayre Raysal-Wasaaraha Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose, Khayre ayaa mudooyinkii danbe safaro iyo socdaal ku kala bixinayay Maamulada Dalka.
Ujeedada Socdaalka Raisal-wasaaraha ayaa daaran u kuurgalida xaalada gobolka, ogaanshaha baahiyaha jira waxa uuna la kulmi doonaa qaybaha kala duwan ee Bulshada ee ku dhaqan Degmada Marka. Khayre ayaa sidoo kale dhagax-dhigi doonaa mashaariiic Horumarineed.
Amniga Marka ayaa si wayn loo adkeeyay, waxaana deegaanadaas mudooyinkii danbe ka socday dagaalo u dhaxeeya ciidamada Dawlada iyo Ururka Alshabaab, Raysal-wasaaraha ayaa horay u tagay Magaalooyinka Baydhaba iyo Xudur.